Nirahina zandrina mpitondra ambony, hono… : Kolonely 3 lahy nibodo tany karieran’olona | NewsMada
Trangan-javatra efa mpiverina matetika hatramin’ny Tetezamita noho mankaty ny fakana na fibodoana tanin’olona, indrindra fa toeram-pitrandrahana vato io. Voatonontonona matetika amin’izany ny manamboninahitra eo anivon’ny mpitandro filaminana, toy tany Ilakaka, Ambatondrazaka sns. Tamin’ity indray mitoraka ity, toeram-pitrandrahana vato iray any amin’ny kaominina Marotsipoy, disitrikan’Anjozorobe, isehoana olana amin’ny resaka fitrandrahana io. Araka ny fanazavana avy amin’ny mpanofa tany fitrandrahana any an-toerana sy ireo mpiara-miasa aminy, misy manamboninahitra kolonely telo mitonona ho iraka havana akaiky ny mpitondra ambony mibodo tany fitrandrahana vato any Anjozorobe io.
Ilay toerana izay marihina fa hofain’olona iray amin’ny tompon’ny tany izay manana taratasy
ara-dalàna. Ara-dalàna, tahaka izany, ihany koa ny fandoavan’io olona mpanofa io ny hofan’ny tany ary tsy mbola tara na indray andro aza, araka ny fanazavana.
Nisy fotoana tonga tany an-toerana ireto manamboninahitra telo ireto niresaka tamin’ny mpanofa ary efa nomeny halalana hiady lavaka eo amin’ny manodidina ilay toerana saingy tsy nanaiky izy ireo fa tadiaviny hidirana an-keriny ilay kariera efa an’olona.Voalaza fa efa maro ny antsojay nahazo io olona mpanofa kariera io satria isaky ny mamoaka vato ilay kariera, misy manakana foana.
Efa nosakanana ny fiara 4×4
Raha tsiahivina, nosakanan’ny polisy tetsy Sabotsy Namehana vao haingana ny 4×4 iray mpitondra ny vaton’io olona io. Vato izay misy taratasy ara-dalàna tsara avokoa ny fitaterana azy.Vao haingana ihany koa, nisy ny fitoriana voalaza fa napetraky ny tompon’ny tany an’io olona manofa ny taniny io. Rehefa tonga teny anivon’ny “police des mines” anefa ny raharaha, nilaza ilay tompon’ny tany fa tsy nasaina novakiny akory io taratasy io fa noterena an-kolaka hosoniaviny. Nolazain’ireo olona mitonona ho iraky ny havan’ny mpitondra ireo fa maika ny olona hanaterana azy ka tsy mila mamaky izy fa manasonia fotsiny.
Mitaraina ireo olona tratran’ny antsojay amin’izao fotoana izao, ary manaitra ny tompon’andraikitra mba hijery akaiky ny toe-draharaha tahaka izao. Ny mpitandro filaminana ve, afaka mijabaka amin’ny raharahan-tany? Inona ny sampana ao amin’ny mpitandro filaminana, indrindra fa manamboninahitra manao ny asa fakana, na fitoriana olona iray amin’ny resaka fitrandrahana vato? Ilana fanazavana avokoa izany rehetra izany.